Qisada Afduubkii Diyaaradda Lufthansa Ee Somalia Lasoo Fadhiisiyey Iyo Haweenay Dunida Korkeeda Danbi Qudha Laba Jeer Lagu Maxkamadeeyay—-Q:2aad | FooreNews
Home wararka Qisada Afduubkii Diyaaradda Lufthansa Ee Somalia Lasoo Fadhiisiyey Iyo Haweenay Dunida Korkeeda Danbi Qudha Laba Jeer Lagu Maxkamadeeyay—-Q:2aad
Qisada Afduubkii Diyaaradda Lufthansa Ee Somalia Lasoo Fadhiisiyey Iyo Haweenay Dunida Korkeeda Danbi Qudha Laba Jeer Lagu Maxkamadeeyay—-Q:2aad
Masuuliyiinta Garoonka diyaaradaha ee Cadan oo wakhtigaa dagaal ka socday waxay sheegeen inaanay suuro gal ahayn inay halkan sii jogaan balse ay uga baxaan sida ugu dhakhsaha badan. Duuliyaha diyaaradda ayaa u sheegay kooxda afduubka inaanay suuro gal ahayn in diyaaradu kacdo maadaama oo laga yaabo inuu dhawac ka soo gaadhay jid cadihii ay fadhiisatay waxaanu codsaday in dhulka loo ogolaado si uu u eego in diyaaradda dhawac soo gaadhay waana loo ogolaaday. Duuliyihii Wuxuu eegay qabaha hoose ee diyarada wuxuu fursad u helay inuu u tago masuuliyiinta garoonka Cadan waxaanu ka dalbaday in dadka la badbaadiyo, balse nasiib darro waxa ay u sheegneen inaan waxba laga qaban Karin isago niyad jabsan ayuu diyaaradii ku laabtay kooxda afduubka ayaa waxay ka baqeen inuu xogta u gudbiyo. Markii duuliyihii gudaha diyaaradda ku soo noqday waxa uu la kulmay Kabtan Maxamuud oo ahaa hogaamiyaha afduubayaasha. Muran iyo buuq dhex maray kadib wuxuu ka toogtay madaxa duuliyihii diyaaradda Jürgen Schumann oo ahaa 37 jir ayaana sidaa ku geeriyooday. Diyaaraddii waxa loogu shubay shidaal waxaana kiciyay Cawiyihii duuliyaha Jürgen Vietor oo ahaa 35 jir isna Jarmal ah. Lixdii subaxnimo ayay ka degeen Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho dalka Somalia, waxaanay codsadeen in maydka laga dajiyo maadaama uu ur sameeyay.
Madaxii kooxda Af-duubayaasha Kabtan Maxamuud wuxuu u qushuucay qaabka duulimaadka waxaanu abaal gud uga dhigay inuu xorriyadiisa siiyo meesha uu doonana uu tagi karo Duuliyihii diyaaraddu maadaama oo ay Muqdisho tahay meesha u danabaysa oo aanay jirin meel ay u soo dhaafi karaan wuxuu dalbday inuu shaqaalaha la sii joogo.
Masuuliyiintii Jarmalka Galbeed waxay Soomaaliya ka codsadeen inay ciidamadooda la soo geli karaan taas oo laga aqbalay waxa kale oo ay codsadeen in Afduubayaasha loo laab-qaboojiyo loona sheego in Jarmalku ogolaaday laaluushka iyo inuu maxaabiistii sii dayn doono balse ay wakhti qaadanayso inta maxaabiistaa la keenayo Muqdisho, Soomaliyana sidaasay ugu sheegtay af-duubayaashi.
Cidamada Jarmalka oo daka Jabuuti soo maray waxay bakhtiiyeen laydhka diyaaraddii ay ku soo degayeen gabi ahaanba si aanay dablaydu uga werhelin waxaanay ku qadatay inay ciidamadoodu ku diyaar garoobaan muddo 4 saacadood ah, waxanay salaamo dhigteen xagga danbe ee diyaaradda si albaabada badbaada loogu talo galay ay u furaan, waxaanay qarax ka sameyeen meel u jirta 25 mitir wajahada hore ee diyaaradda iyagoo uga dan lahaa si afduubaysahu u eegaan waxa xagga hore ka dhacay isuguna yimaadaan xaga hore ee diyaaradda taasina way u suuro gashay waxaanay gudaha u galeen diyaaraddii kadibna waxay dileen saddex afduube halka gabadhii Suhaila oo dhawac ahayd ay ka badbaaday. Sidaasi ayaanay ciidamadii Jarmalka ahaa diyaaraddii ku furteen.
Waxa Somaliya ku hadhay gabadhii Suhaila Sayeh oo ahayd gabadha kaliya ee ka badbaaday dadkii afduubka gaystay iyadoo lagu daaweeyay Cisbitaalka Muqdisho ee Somalia.
Dawladdii Maxamed Siyaas Barre ee Somaliya ayaa maxkamad ku saartay Magalada Muqdisho waxanay ku xukuntay 20 sano oo xabsi ah.
Suhaila ayaa markay saddex sano Soomaliya ku xidhnayd waxa la soo darsay xalad daran oo cafimaad la’aana waan la sii dayay. Suhaila waxa loo dhoofiyay dalka ay u dhalatay ee Lubnaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Baryuud.
1991-kii ayaa Suhaila oo ay weheliyaan Ninkeeda iyo caruurteedu waxa ay u guureen dalka Norway halkaas oo mar dambe oo ku beegnayd 1994-kii ay ciidamada bilayska ee dalka Norway aqoonsadeen inay tahay gabadh ka mid ah kuwii afduubay diyaaraddii Jarmalka ee Luftansa xabsiga ayaan loo taxaabay waxaanay u gacan galiyeen dawladdii Jarmalka oo xilligaasi raadinaysa. Waxa haweenaydii uu Jarmalkuna ku xukumay 12 sano oo xabsi ah markay saddex sano xidhayn ayaa xalaad cafimaad darro la soo daristay waana la sii dayay mar kale.
Golayaasha sharci dejinta ee Jarmalka aya aad uga dooday kiiska la xidhiidha Xadhiga Suhaila waxaanay noqotay haweenayda kaliya ee dunida laba jeer loo xukumay danbi isku mid ah ee lagu kala xukumay laba dal.
War bixinaha dhinaca taariikhda ee laga qoray nolosha Suhaila ayaa waxa la sheegay inay ku nooshahay waddanka Norway oo ay dib ugu soo laabtay markii Jarmalka laga soo dayay.
Diyaarada Landshut ee ay lahayd Shirkada diyaaradaha Lutfansa afduubkii ka dib dhawr jeer baa la kala iibsaday wakthigana waa hawl gab waxaanay taalaa madxaf ku yaala dalka Jarmalka.
Waxa Innoo Turjumay Qisadan
Previous PostXoghaye Uur-Cade Oo Ganafka Ku Dhuftay Go’aankii Gudida Fulinta Ee Xisbiga WADDANI Xilka Kaga Qaaday, Kagana Jawaabay Weerar Afka Ah Oo Uu Qaaday Gudoomiye Cirro Next PostDaawo Hees Cajiib Ah Oo Qudhunka Qabyaalada Ka Digaysa Oo Ay Qaadayaan Ardayda Wax Ka Barata Dugsiga Sare Ee Hablaha Nuuradiin Ee Magaalada Hargeysa.